Magwaro echiKristu echiGiriki anotaura kakawanda nezvaBhanabhasi naPauro. Varume ava vakashumira sevatariri vanofambira, vachishanyira ungano dzekutanga. Vaizviitirei? Vaiva nehanya zvechokwadi nokugara zvakanaka kwehama dzavo dzechiKristu. Pauro akati aida ‘kudzokera kuti ashanyire hama’ achiona kuti dzakadini. Aitoda kufamba mazana emakiromita kuti aende kunodzisimbisa. (Mabasa 15:36) Ichocho ndicho chishuvo chine vatariri vedu vanofambira mazuva ano.
Vanouya kuzotikurudzira. Mutariri wedunhu mumwe nemumwe anoshanyira ungano dzinenge 20, achipedza vhiki neungano imwe neimwe kaviri pagore. Tinogona kubatsirwa zvikuru neruzivo rwehama idzi uye rwemadzimai avo kana vakaroora. Vanoedza kusvika pakutiziva tose vakuru nevadiki, uye vanoenda nesu muushumiri hwemumunda uye kuzvidzidzo zvedu zveBhaibheri. Vatariri ava vanoita kushanya kwekufudza nevakuru vemungano, uye vanopa hurukuro dzinosimbisa uye dzinokurudzira pamisangano nepamagungano.—Mabasa 15:35.
Vanoratidza kuti vane hanya nevanhu vose. Vatariri vematunhu vane hanya zvikuru nemamiriro akaita ungano mune zvokunamata. Vanoita misangano nevakuru nevashumiri vanoshumira kuti vakurukure kufambira mberi kunenge kwaitwa uye kuti vavape mazano anoshanda pakuita mabasa avo. Vanobatsira mapiyona kuti abudirire muushumiri hwavo, uye vanonakidzwa nokuzivana nevachangotanga kuwadzana neungano uye kunzwa nezvekufambira mberi kwavo mune zvokunamata. Mumwe nemumwe wehama idzi anozvipa ‘semushandi pamwe chete nesu nokuda kwezvinhu zvine chokuita nesu.’ (2 VaKorinde 8:23) Tinofanira kutevedzera kutenda uye kuzvipira kwavo kuna Mwari.—VaHebheru 13:7.
Vatariri vematunhu vanoshanyira ungano nechinangwa chipi?
Ungabatsirwa sei nokushanya kwavanoita?
Maka pakarenda yako mazuva ayo mutariri wedunhu achashanyira ungano nguva inotevera kuitira kuti usarasikirwe nehurukuro dzake paImba yoUmambo. Kana uchizoda kuti iye kana kuti mudzimai wake avepowo paunenge uchidzidza Bhaibheri vhiki iyoyo kuitira kuti muzivane, udza munhu ari kukudzidzisa.